Home Wararka Xamar oo uu ka Socdo Xaraash Hantida Qaranka iyo Xoog Hantida Dadweynaha...
Xamar oo uu ka Socdo Xaraash Hantida Qaranka iyo Xoog Hantida Dadweynaha Doorashada ka hor.
Waxaa isa soo taraya in dhulal badan inay iibiyeen dowlaaddaan hadda waqtigeeda dhamaaday, dhulalkaas oo uu amray MW Farmajo in la iibiyo si loogu galo doorashada, kuwana uu isaga gacantiisa ku iibiyey sida afarta dekadood oo Itoobiya laga iibiyey.
Warka xanuunka leh ee hadda magaaladan cid waliba la fajacsan tahay waa golihii Murtida iyo Madadaalada oo lagu dhisay isxilqaan iyo xoogga shacbiga oo uu garwardeen ka ahaa abwaan Cisman Cabdulle Guure oo la sheegay in la ga iibiyey shirkad ay gabari leedahay, lana yiri xataa dowladda Otober 2021 xilka ka tirsan doonta Farmaajo Ilaahy idinkiisa ma joojin karto waxaana qandaraaska ka sii dhaxlaya ilamheeda.
Waxaa halkaas ka muuqata inay hadda so wada baxayaan dhaammaan ceebihii iyo ay dowladdaan falkisay marka laga soo bilaabo 2017 ilaa iyo hadda. Weli waxaa is dabajoog ah u socda boobka hantida qaranka iyp tan shacbiga oo iyagana hadda lagu hayo dhib weyn.
Dhulal iyo guryo ay dad shacab ah leeyihiin ayaa lagala wareegay iyadoo awood dowladeed la isticmaalayo kadibna dad laga sii gaday. Dhamaan degmooyinka Xamar waa ka socda boob iyo beecin waxkasta oo keeni karaa lacag caddaan ah oo degdeg ah.
Tiyaatarka qaranka oo ay Somali oo dhan dhiigeeda ku dhisatay oo dib ugu soo nooleeyey dhaqankii ummaddaan iyo in lagu horjoogsado waxyaabaha xun xun ee bulshada laga wacyi geliyo ayaa hadda waxaa shitay oo jeebka ku shubtay Farmaajo iyo Fahad waxaana hawl fuliyayaal ka ahaa laba nin oo aan wax dan ka gelin wixii ka dumaya iyo wixii doorsoomaya dalkaan. Labadaas nin waa Wasiir Dubbe oo diiqyeerki u badalay inuu dullaallo hantida qaranka iyo Maraayeeha Tiyaatarka oo weligiiis ahaa shakhsi liita oo ay qabiil u joogto weligiisna aa qaran sawiran Karin Abwaan Shube.
Maareeyey Shube waxaa diiwaanka taarikhda ugu jira inuu weligii ahaa shakhsi aad uga liita qarannimada kuna soo dhex noolaa hawo iyo hadoofil qabiil waxaa laga hayaa Beydadkan oo kamid gabay uu u bixiyey “Ergo Daarood”. Beydadku waxay leeyihiin“ tolkeey Daarood baan rabaa inay ku diiraane, oo inay daawo yeeshaan baan rabaa ubadka Daaroode… inaan dowladnimo sii wadnaa waa habeen dumaye, dubaaxa intaad wada cuntaan doodda ku heshiiya, dubaaxdaa shisheeyuhu ka dhergay siiya doqonkiina, iga daaya hayb-haybtu waa ina dileysaaye”.
Waxaasa qadarin iyo qiimeyn mug leh mudan Abwan Cisman Cabdulle Guure, Abwaan Maki Xaji Badanadir iyo Abwaan Cabdi Dhuux iyo waliba fanaan qiima badan oo muujiey dareen shucuur leh, waxaana laga rabaa qofkasta oo Somali ah inuu ka qeyb qaato sidii dalka looga saari lahaa kooxdaan duminta dadaalka weyn oo waxba loo reeban ugu jira.
Abwaan Guure ayaa waxaa laga hayaa Tix gaaban oo dareen iyo xanuun mug weyn leh Tixdaas oo uu kula hadlay RW Rooble “ Haddaad been ku timid shalay buro fool ku taal iyo bar madow inaa tahay maanta waa ku barannoo berri nama dageyside Fahad Boqor hakaa dhigo”.
Tixdaan waa cashar cid waliba ay tahay inuu fahmo Farmajo iyo Fahad oo ay Muqdisho Online 2017 idiin caddeysay cidda ay yihiin iyo dhibaatada ay dalkaan u keeni doonaan ayaa maanta waxay ku celineysaa inaan arki doontaa ilmahiinna oo inta la idin ka soo qaado la gadayo ama xubnahooda oo la gadayo.
Marka kale abwaan Guure oo is leh armey wax dareen waddanimo ah ku hareen RW Rooble ayaa isagana hawada u mariyey beydkaan doqon uusan garan Karin qiimahiisa diracsa uu ka calool xumaado kana qaado tallaabo cashar u noqota tuugada iyo dullaalladooda dambe “Haddaad daawaneysiyo haddii aad difaacdaba dalka waa la gadayaa”.
Haddaba Shacbiga iyo Mucaaridka waxaa laga rabaa inay kala dortaan laba:
Inay ka aamusaan oo ay qeyb ka noqdaan xaraashka iyo xaalufinta dalka.
Inay sameeyaan Bannaanbaxyo nabadeed oo lagu muujinayo inaan Farmajo iyo Fahad dalka lagu sii daawan Karin.
Hadddii kale waxaa laga gaari doonaa maalin ay cid waliba soo xuusasto erayda abwaan Guure oo digniinta ah ee uu shacbiga Rooble wada diray iyo Degniinta joogtada noqotay ee odorskeedu mar waliba sax yahay ee Muqdisho Online.
Ugu dambeyn baaqa Bulshada waxaa uu yahay Madaxweyne Farmajow Mar haddaad caruurteennii cadow u dhiibtay, mar haddaad muwaddin Somaliyeed Itoobiya u loogtay, mar hadda dekadihii iibsatay, mar haddaad …. Mar haddad hantidii qaranka, sida golayaashii dhaqanka iyo hiddaha sida Tiyaatarka aad iibineyso Farmajow is Casil oo Naga tag.